China Dongshen rendrika hoditra malefaka volon'osy volon'osy hazo fikosoham-bolo makiazy napetraka mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen rendrika hoditra malefaka volon'osy volon'osy hazo fikosoham-bolo vita amin'ny makiazy matihanina
Ny setrin'ny borosy matihanina 15 pcs dia vita amin'ny volon'osy, ferrule varahina ary tahony hazo. Malemilemy sy malama ny volo osy, ary mifikitra mafy amin'ny vovoka. Ny famolavolana haingo avo lenta dia tsy slip, fihazonana mafy, ary tsy ho reraka aorian'ny fampiasana maharitra. Ny safidy tsara indrindra ho an'ny mpanakanto makiazy!
Borosy volo malalaka: Ny makiazy vita amin'ny vovoka borosy dia manana endrika silky, ary ny tarehy makiazy dia madio sy maharitra kokoa.
Borosy Concealer: Ny loha borosy tsara dia afaka manadio ireo faritra sarotra tratrarina, ary ny vokatr'ilay fanafenana dia mitovy sy voajanahary kokoa.
Borosy borosy: Borosio ny volon-koditra amin'ny fihodirana voajanahary, ny aloka mifangaro ary ny fanasongadinana tsara ny endrika-tarehy.
Borosy eyeshadow: Isan-karazany. Mila manamboatra borosy aloky ny maso amin'ny habe samihafa mba hifanaraka amin'ny fomba fanaovana contouring ny maso.
Borosy volomaso: Amin'ny vovo-volomaso dia afaka manintona endrika volomaso somary voajanahary. Mora kokoa ny mifehy ny hamafiny sy ny alokaloka noho ny pensilihazo amin'ny volomaso.
Borosy molotra: Soraty tsara ny bikan'ny molotra, ataovy feno sy feno fanamiana ny molotra ary maharitra ela kokoa.
Borosy fototra: Ampiasaina hametrahana fototra misy ranoka, ny fepetra takiana amin'ny borosy sy ny fototr'izany dia avo dia avo.
Borosy borosy tarehy: Ny mampiavaka azy dia ny loha borosy dia 45 °, ny habeny dia mitovy amin'ny borosy mena, ary matevina kokoa ny volom-borona.
Volo material Volon'osy, volo sentetika
- VOAFETY hatsarana feno borosy makiazy matihanina, naseho tamim-pahamendrehana tao anaty fonosana borosy vita kanto mba hitazomana ny borosinao, ao an-trano na rehefa mandeha.
- TANANA MAHAY:Miaraka amin'ny kalitao hazo sy ferrule miaraka. Maivana sy mahazo aina, na oviana na oviana ianao mampiasa borosy, tsy hahatsiaro reraka. Tsy mifatotra, mifikitra mafy, afaka miasa tsara kokoa amin'ny borosy fanaovana makiazy isan-karazany ianao, manome anao ny traikefa vokatra tsara indrindra.
- FANomezana PERFECT: Tsy azonao an-tsaina hoe ohatrinona ity borosy makiazy ity no ankafizin'ny vehivavy. Na omena ny tenanao na ho fanomezana ho an'ny namanao vavy izany dia hampiantsoantso ny olona, ​​ny vehivavy rehetra maniry hatsaran-tarehy Mendrika fanomezana sarobidy toy izany.
Teo aloha: Dongshen makiazy borosy vegan namana volo sentetika malefaka volom-boasary kitapo makiazy borosy set
Manaraka: Kitapo kitapon-tarehy borosy makarakara ho an'ny mpanakanto matihanina mpanakanto borosy kitapom-batana mijoro-up makiazy makiazy tantera-drano vovoka-porofo borosy fitahirizana kitapo
Custom borosy Set
Kitapo borosy tarehy
Mpanamboatra borosy makiazy
Dongshen fanao manokana marika ambongadiny ambongadiny vegan c ...
Dongshen matihanina borosy makiazy napetraka makiazy t ...
Vovoka makiazy voajanahary Dongshen lafo volo ...
7 pcs volontsôkôlà vegan sentetika volo mainty mitantana mi ...
Ny volo sentetika vita amin'ny kofehy malala hoditra ...
Fitaovana borosy makiazy, Manaova borosy, Mametraha makiazy borosy, Faritra fiharatra, Barber Shave, borosy makiazy napetraka,